Gbasara Anyị - Shijiazhuang Baoerxi Plastic Products Co., ltd.
Anyị nwere teknụzụ dị elu na akụrụngwa nhazi, ngwaahịa anyị gụnyere Pee, EVA, EPDM, NBR / PVC na ụdị egwuregwu egwuregwu agba agba dị iche iche. Anyị nwere ihe karịrị ụdị akwa ikpere 40, Nke a ma ama na Europe, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, North America na Middle East wdg. A na-eji ha arụ ọrụ na-arụzi ụgbọala, ewu ụlọ, ịgbado ọkụ elektrọn, egwuregwu, ubi na ngwa ọrụ ndị ọzọ.
Iji mezuo ihe ndị a chọrọ n’ahịa, anyị emepụtala pọọsụ ikpere EVA (iji uwe ogologo ọkpa na-arụ ọrụ), brọọ yoga, akwa yoga, akwa mpịachi, ogige na ụgbọ ala na-arụzi ikpere na ngwaahịa ndị na-esochi anya.
"Ọmarịcha ngwaahịa dị mma, ezigbo mmụọ imekọ ihe ọnụ, ezigbo ụlọ ọrụ, ọrụ ngwa ngwa ngwa ngwa" bụ nkà ihe ọmụma azụmahịa ụlọ ọrụ anyị.
Ebumnuche anyị mgbe niile bụ ka anyị nyefee ngwaahịa niile nke ụfụfụ plastik, were zụrụ ndị ahịa anyị ọnụahịa ezi uche na nke kachasị mma. Jiri obi gị niile nabata ndị enyi gị iji mee ka mmekọrịta anyị na ụlọ ọrụ anyị nwee ogologo oge.